Suuqgeynta Mawduuca iyo Nidaamyada Suuqgeynta Nuxurka | Martech Zone
Waxyaabaha ay ka kooban yihiin, adeegyada iyo wararka loogu talagalay suuqleyda barta teknolojiyadda Suuqgeynta. Wargeysyada, daraasadaha kiisaska, baloogyada shirkadaha, iyo qorista talooyinka iyo tabaha Martech Zone
Mid ka mid ah shaqooyinka runtii lagu raaxeysto ee buuxiya ee aan lahaa ayaa u shaqeynayay sidii maareeyaha wax soo saarka ee madal SaaS ganacsi. Dadku waxay dhayalsadaan hannaanka looga baahan yahay inay si guul leh u qorsheeyaan, naqshadeeyaan, tusaaleeyaan, iskana kaashadaan is -beddellada ugu yar ee adeegsadaha. Si loo qorsheeyo astaamaha ugu yar ama is -beddelka is -dhexgalka, waxaan wareysan doonaa dadka aadka u culus ee madal sida ay uga faa'iideystaan ​​oo ula falgalaan madasha, wareysi u yeeshaan macaamiisha mustaqbalka sida ay
In kasta oo aan maalin kasta si qoto dheer ugu dhex jiro farsamada, ma helo waqti aad u badan sida aan jeclaan lahaa inaan la wadaago isku -dhafka adag iyo otomaatiga ee shirkadaydu u hirgeliso macaamiisha. Sidoo kale, ma haysto waqti badan oo daahfurka. Farsamada ugu badan ee aan wax ka qoro waa shirkado raadiya Martech Zone iyaga oo daboolaya, laakiin marba mar - gaar ahaan Twitter -ka - waxaan arkaa waxoogaa guux ah oo ku xeeran mid cusub